Dr. Kyaw Swar Oo – Healthy Life Journal
Dr. Kyaw Swar Oo
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတာဝန်ခံ၊ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်
Posts By Dr. Kyaw Swar Oo
အနံ့ပျောက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များ
———၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး ၊——— အနံ့ပျောက်တာ၊ ဖျားတာနဲ့ ပက်သက်လို့ မေးကြတာ အတော်များလာပါတယ်။ အဲဒီမှာ တချို့ကလည်း အကြောက်လွန်ပြီး လုပ်တာတွေအတွက် အကြံပြုချင်လို့ ဒီစာလေးရေးဖြစ်တာပါ။ သံသယလက္ခဏာတွေ ခံစားရလို့ ဖုန်းဆက်မေးတာ၊ တိုင်ပင်တာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါ။ တချို့ ပြောတာလေးတွေအတွက်တော့...
—–၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မိုးတွင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ A. ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါက ဘက်တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ခရီးသွားတဲ့အခါ မသန့်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စားသောက်မိလို့ဖြစ်တဲ့...
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဘယ်လိုအခြေအနေတွေက အရေပြားတွင်း ပိုးဝင်စေပါသလဲ ဆရာ။ A. အရေပြားတွင်း ပိုးဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်လို့ဖြစ်တဲ့ အရေပြားရောဂါပါ။...
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အဆုတ်တွင်း လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အဆုတ်မှာ အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါ လေပြွန်သေးသေးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဆုတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာက အထူးသဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။...
အမာရွတ်အသားသီး (Keloid) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အမာရွတ်အသားသီး(Keloid)က ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ A. လူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားမှာ တစ်ခုခု ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တွယ်ဆက်တစ်သျှူးတွေက ပြန်ပြီး ကောင်းစေအောင် ပြုပြင်တဲ့အခါ...
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဘာကြောင့် ကြို့ထိုးရတာပါလဲ ဆရာ။ A. ခန္ဓာကိုယ်ရင်အုပ်ပိုင်းနဲ့ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းကို ခြားထားတဲ့ ကန့်လန့်ကာကြွက်သား (Diaphragm)က ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာ ညှစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အသံထွက်တဲ့ Vocal...
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. တချို့သူတွေမှာ ရုတ်တရက်သတိလစ်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အထူးသဖြင့် နှလုံးရုတ်တရက် ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင် သတိလစ်ပြီး လဲတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သွေးပေါင်အရမ်းမြင့်တက်သွားတဲ့အခါ ရုတ်တရက်...
အိပ်ပျော်နေရင်း ရုတ်တရက် အသက်ရှူရပ်တာက သတိထားရမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာလား . . .
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ တချို့လူတွေက ရုတ်တရက် အသက်ရှူရပ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ။ A. တချို့လူတွေက အိပ်နေရင်းနဲ့ အိပ်ရာထဲမှာပဲ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမျိုး ကြားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရတာက အိပ်ပျော်နေချိန်...
နေ့စဉ် အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲ မြဲပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုသလို ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအကြောင်း သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုခုကို မနားမနေ တာရှည်ပြုလုပ်တာကြောင့်...
—–၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အခုနောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက သြဂဲနစ်အစားအသောက်တွေကို အပြောများလာကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေး ပြောပြပေးပါဦး ဆရာ။ A. အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Organic Food လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝသြဂဲနစ်အစားအသောက်တွေကိုပဲ အဓိက ရွေးချယ်စားသောက်ကြဖို့...